ခက်မာ: ဒုတိယနတ်သား 1. 2.
အဲဒီ့နေ့က နှင်းမုန်တိုင်းလည်းမကျပါဘူး။ ရေခဲမိုးလည်း မရွာပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ဆန်ဖရန် စစ်စကိုကပစ်စ်ဘတ်ကိုသွားမယ့်လေယာဉ်ကတစ်နာရီနောက်ကျမယ်တဲ့။ ကျမနည်းနည်းတော့ စိတ်ညစ်သွား တယ်။ ပုံမှန်အတိုင်းတောင်လေယာဉ်ကပစဘတ်ကိုည၁၀နာရီခွဲမှဝင်မှာ။ အဲဒီအချိန်ဆိုရင် တော့ taxi ဖြစ်ဖြစ် Shuttle Bus ဖြစ်ဖြစ်စီးသွားလို့ရသေးတယ်။ ရသေးတယ်ဆိုတာစီးရဲသေးတာကို ပြောတာပါ။ ကျမတို့မှာကား မရှိဘူးလေ။ ခုအတိုင်းဆိုရင်တော့လေယာဉ်ကအနည်းဆုံး ၁၁နာရီခွဲလောက် မှဝင်မယ်။ baggageထုတ်မှာနဲ့ဆို ၁၂နာရီ။ သက်ပြင်းလည်းမချချင်တော့ပါဘူး။ ကျမဘ၀မှာ ဒီလိုအခက် အခဲဆိုတာကရိုးနေပြီလေ။
San Francisco Asian Art Museumမှာကျင်းပနေတဲ့ ထိုင်း-မြန်မာအနုပညာပြပွဲမှာ မြန်မာစာရေး ဆရာတယောက်ရဲ့ Reading ထည့်ချင်တယ်ဆိုပြီး Museum ကဖိတ်လို့ကျမလာခဲ့တာပါ။ Reading မှာ‘NightFlow”(ညရေစီး)ဆိုတဲ့ကျမရဲ့ဝတ္ထုတိုတစ်ပုဒ်ဖတ်ခဲ့တယ်။ ကျမရဲ့မိတ်ဆွေဦးအောင် အောင်တိတ်အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပေးပြီး သူငယ်ချင်းနယူးဇီလန်စာရေးဆရာမ Penelope Toddတည်း ဖြတ်ပေးခဲ့တာပါ။ကျမရဲ့ကိုရီးယားသူငယ်ချင်းရာဟီဒေါက်(RaHeeDuk) ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကိုသဘော ကျပြီးစိတ်ကူးရသွားတဲ့ ၀တ္ထုလေးတပုဒ်ပေါ့။
ကျမ၂၀၀၇ခုနှစ် International Writingr Pogramအတွက်အိုင်အိုဝါးစီးတီးမှာ တခြားတိုင်း ပြည်က စာရေးဆရာအယောက်၄၀နီးပါးနဲ့ နေရစဉ်တုန်းကပေါ့။ကျမတို့နေရတဲ့ဟိုတယ်လ်ဘေးအိုင်အိုဝါမြစ် ကမ်းမှာညတိုင်းနီးပါးကျမတို့လမ်းလျှောက်ဖြစ်ကြတယ်။ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့စီးဆင်းနေတဲ့ အိုင်အိုဝါမြစ်ရေကို ကြည့်ရင်းရာဟီဒေါက်ပြောခဲ့တာ။ညဘက်မှာစီးတဲ့မြစ်ရေဟာသိပ်စိတ်ဝင်စရာကောင်းသတဲ့လေ။ အပေါ်ယံ မှာတည်ငြိမ်လှပသလောက် မြစ်အောက်ခြေမှာရုန်းကန်မှုများနေသတဲ့။ အပေါ်ယံမျက်နှာကျောမာလှသလို့ လူတော်တော်များများသတ်မှတ်ခံရတဲ့ ကျမရင်ထဲက၀ဲကတော့တွေအကြောင်းစောကြောမိတဲ့ကျမက ကိုယ့် ကိုကိုယ်ညရေစီး နဲ့နှိုင်းပြီးအဲဒီဝတ္ထုလေးရေးခဲ့မိတာ။
အဲ့ဒီခရီးစဉ်မှာပဲ“နှင်းနတ်သား”ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးတပုဒ်ရေးမိခဲ့သေးတယ်။လေယာဉ်ကွင်းမှာဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ သဘောဖြူလူငယ်လေးတယောက်အကြောင်းရေးခဲ့တဲ့ဝတ္ထုလေးကိုလေယာဉ်အကြာကြီးစောင့်ရင်းသတိ ရနေမိသေးရဲ့။အဲဒီတုန်းကတော့ရေခဲမိုးနဲ့နှင်းမုန်တိုင်းထဲမှာ။ဒီကနေ့ကတော့ဘာလို့လေယာဉ်နောက်ကျမှန်း မသိပေမယ့်ရာသီဥတုကမဆိုးလှပါဘူး။နေ့လည်၂နာရီခွဲထွက်ရမယ့်လေယာဉ်ကညနေ၃နာရီခွဲကျော်ကျော်မှ
ထွက်တော့ ပစ္စဘတ်ကိုည၁၁နာရီခွဲကျော်မှရောက်တယ်။ (TimeZone ကလည်း ၃နာရီခြားသေးတာကိုး)
“နှင်းနတ်သား" ၀တ္ထုတိုထဲကအတိုင်း ကျမကဆက်တိုက်ကံဆိုးတတ်လေတော့ Baggageတွေကတော် တော်နဲ့ထွက်မလာဘူး။နာရီဝက်လောက်စောင့်ပြီးမှကိုယ့်အိတ်ကိုယ်ထုတ်နိုင်တော့တယ်။ ဒီတော့ချက်ချင်းပဲ Shuttle bus စီးရမယ့်ကောင်တာကိုပြေးရတော့တာပေါ့။
ရင် သူတို့ပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုန်းခေါ်ပါတဲ့။ ဒါနဲ့ ကျမလည်းဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်။ ပထမဆုံးကြားရတာ
အော်တိုဖုန်းဖြေတဲ့စက်။တစ်ဖက်ကဖုန်းဖြေမယ့်သူavailableဖြစ်သည်ထိကိုင်ထားပါတဲ့။ကျမဖုန်းကိုင်ထားရင်း လယာဉ်ကွင်းထဲကိုမျက်လုံးဝေ့ကြည့်မိတယ်။လေယာဉ်ကွင်းထဲမှာဝန်ထမ်းတွေအပါအ၀င်လူလေးငါးယောက်လောက်ပဲတွေ့ရတော့တယ်။ ဖုန်းထဲကလည်း ဒေါင်ဒေါင်ဒင်ဒင်တီးလုံးတွေပဲကြားနေရတုန်း။ ကျမနည်းနည်တော့စိတ်ပူပြီ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျမနောက်ကခြေသံတဒေါက်ဒေါက်ကြားလိုက်ရတာ။ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့လောင်းကုတ်ရှည်ဝတ်ထားတဲ့ လူငယ်လေးတယောက် Shuttle Bus လက်မှတ်ဝယ်တဲ့စက်ဆီတန်းသွားနေတယ်။သူဟိုနှိပ်ဒီနှိပ်နဲ့စက်ထဲ ကလက်မှတ်ဖြတ်ပိုင်းလေးထွက်လာတာမြင်လိုက်တော့ကျမဖုန်းပိတ်လိုက်ပြီး သူ့နားကိုလျှောက်သွားလိုက် တယ်။
သူကကျမမျက်နှာကိုဖြတ်ကနဲတချက်ပဲကြည့်ပြီးလက်မှတ်ဝယ်တဲ့စက်ကိုဟိုနှိပ်ဒီနှိပ်နှိပ်ပြန်တယ်။ပြီးတော့ ကျမနာမည်နဲ့လိပ်စာမေးတယ်။ ပြီးစက်ထဲရိုက်ထည့်တယ်။ ခဏချင်းမှာပဲလက်မှတ်နဲ့ပြေစာဖြတ်ပိုင်းလေး လျှောကနဲထွက်လာတယ်။သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးကျမတို့၂ယောက် လေယာဉ်ကွင်းအပြင်ဖက်က shuttle busဂိတ်ကိုထွက်ခဲ့ကြ တယ်။လေယာဉ်ကွင်းအပြင်ဖက်က စိမ့်နေအောင်အေးတဲ့လေကကျမတို့ ကိုနှုတ်ဆက်တယ်။ ရာသီဥတုက ကြည်လင်သာယာနေပေမယ့် အေးချက်ကတော့ရက်ရက်စက်စက်ပါပဲ။
သူကသူ့ဂျာကင်ကော်လာကိုမေးစေ့ရောက်အောင်ထောင်လိုက်ပြီးမေးတယ်။ သူ့လက်ထဲမှာ ပလတ်စတစ်နဲ့ပတ်ကာထားပြီးအကျီင်္ချိတ်တန်းလန်းနဲ့ဝတ်စုံတစုံကိုလည်းကိုင်ထားသေးတယ်။
လာပြန်ပြီ။ အိန္ဒိယနွယ်ဖွား။ ၂၀၀၇ခုနှစ်တုန်းကရေခဲမိုးတွေ၊နှင်းမုန်တိုင်းတွေကြားကျမနဲ့အတူတညလုံး လေယာဉ်ကွင်းမှာထိုင်စောင့်ပြီးဖွေးဖွေးလှုပ်နေတဲ့နှင်းတွေကြားထဲကနေ ကျမကိုဟိုတယ်အရောက်လိုက်ပို့
ပေးခဲ့တာလဲ အိန္ဒိယသားပဲ။ အဲ့ဒိအိန္ဒိယသားကိုတော့ စိတ်ညစ်ညူးဖွယ်ရာနှင်းမုန်တိုင်းကြားမှာမထင်မှတ်နိုင် အောင်ကျမကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ကူညီခဲ့တာမို့ “နှင်းနတ်သား”လို့တင်စားခဲ့တယ်။
“ကျနော်က ချီကာဂိုကပါ။ ပစ္စဘတ်မှာ ဆေးကျောင်းတက်ဖို့ ၀င်ခွင့်အင်တာဗျူးလာဖြေတာ။”
“ကျမကဒီမှာ Writing Program နဲ့နေတာပါ။ Residency Writing Programပေါ့”
“Residency Writing Program ဆိုတာဘာလဲ။ ဆောရီးပဲ။ ကျနော်သိပ်နားမလည်လို့ပါ”
စာပေနဲ့စာရေးဆရာလောကနဲ့ဝေးတဲ့ ဆရာဝန်လောင်းလေးကိုကျမရယ်မောရင်းကြည့်မိတယ်။ ပြီးတော့ကျမကစာရေးဆရာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ စာရေးဆရာတွေအတွက် Writing Program တွေအကြောင်း ရှင်းပြမိတယ်။သူကတအံ့တသြနဲ့really?တွေတလှေကြီးနဲ့တုန့်ပြန်လို့လေ။လေယာဉ်ကွင်းကိုဖြတ်တိုက်လာ တဲ့လေက အကာအကွယ်လွတ်နေတဲ့ကျမတို့မျက်နှာတွေကိုမညှာမတာတိုး ဝှေ့နေတယ်။
သိပ်ချမ်းပေမယ့်ကျမအထဲမ၀င်ဖြစ်ပါဘူး။ ကားစောင့်နေတဲ့သူက၂ယောက်ထဲပေမယ့်ကားရောက်လာခဲ့ ရင်ကားနားအမြန်ဆုံးရောက်ချင်စိတ်နဲ့ Shuttle Bus ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်အောက်မှာပဲ ပရပ်နေမိတယ်။ သူ
ပြောတာနဲ့လေဆိပ်အဆောက်အအုံထဲလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လူတယောက်မှမမြင်ရတော့ဘူး။ အဲဒီလောက် ကြီးမားတဲ့အဆောက်အဦးနဲ့ကွင်းပြင်ကြီးထဲမှာသက်ရှိလူသားဆိုလို့သူနဲ့ကျမ၂ယောက်ထဲရယ်။ခပ်လှမ်းလှမ်း မှာတော့ yellowcab taxi သုံးစီးတန်းစီရပ်ထားတယ်။ အထဲမှာဒရိုင်ဘာတွေတော့ရှိမှာပဲ။ သူတို့အေးလွန်းလို့ အပြင်မထွက်ကြတာနေမှာ။
“ကျနော်တို့ကားစောင့်နေတာ၁နာရီနီးပါးရှိပြီ။ ကျနော်shuttlebus company ကိုဖုန်းဆက် လိုက်ဦးမယ်”
သူကကားလက်မှတ်ပေါ်မှာပါတဲ့နံပါတ်ကိုဖုန်းလှမ်ခေါ်ပြီးလေကွယ်တဲ့ဝင်ပေါက်နားမှာစကား သွားပြောတယ်။ သူစကားပြောတာဆယ်မိနစ်လောက်တော့ကြာမယ်ထင်တယ်။ နံပါတ်တစ်ခုရေးမှတ်ထား တဲ့စာရွက်ကလေးကိုင်ပြီး ကျမနားပြန်ရောက်လာတယ်။
“ကျနော်တို့အစောကြီးထဲကဖုန်းဆက်သင့်တာ။စကားပြောနေကြတာနဲ့ ဖုန်းဆက်ဖို့မေ့သွားတယ်။ Shuttle က၁၁နာရီခွဲနောက်ဆုံးတဲ့။ မနက်၃နာရီကျမှ နောက်တကျော့ပြန်စမတဲ့”
ကျမဒီတခါတော့ တော်တော်စိတ်ညစ်သွားတာ။ နာရီကြည့်လိုက်တော့ ည၂နာရီထိုးခါနီးပြီ။ မနက်၃နာရီထိစောင့်ရဦးမှာလား။ဗိုက်ကလဲဆာလှပြီ။ ချမ်းကလဲချမ်းလှပြီ။ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ခရီးဆောင် အိတ်ပေါ်ထိုင်ချတော့မှ သူကရေးမှတ်ထားတဲ့စာရွက်ကလေးကျမရှေ့ထိုးပြရင်းပြောတယ်။
“သူတို့ကဒီလိုလုပ်ဖို့ပြောတယ်။ တွေ့တဲ့ Yellow Cab ဒရိုင်ဘာကိုကျနော်တို့ရဲ့လက်မှတ်တွေပြ။ ဒီကုတ် နံပါတ်ပေးပြီး ဖုန်းဆက်ခိုင်းပါတဲ့။သူတို့ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့”
ကျမတို့အနီးဆုံးYellowCabဆီထွက်ခဲ့ကြတယ်။သူနဲ့လူမည်းဒရိုင်ဘာတို့အပြန်အလှန်ပြောကြ ပြီးမှ သူကကျမဖက်လှည့်ပြောတယ်။
“ခင်ဗျားနဲ့ကျနော်အတူတူသွားမလား။ ကိုယ့်ဖာသာတစီးသပ်သပ်သွားချင်လား။ ခင်ဗျားဆန္ဒရှိသလို လုပ်လို့ရတယ်”
ကျမကမန်းကတန်းတုန့်ပြန်လိုက်တယ်။ည၁နာရီကြီး လူမည်းဒရိုင်ဘာနဲ့ကျမနှစ်ယောက်ထဲမသွားရဲ ဘူးလေ။
ဒရိုင်ဘာကသူပေးတဲ့နံပါတ်နဲ့ဖုန်းဆက်နေတာအတော်ကြာသေးတယ်။ ပြီးတော့ Navigator ထဲမှာကျမတို့လ်ိပ်စာတွေထည့်တယ်။ ဆရာဝန်လောင်းလေးက မြို့ထဲကဟိုတယ်တခုမှာတည်းမှာဆိုတော့ ကျမကိုနောက်မှပို့မှာပဲ။ ကောင်လေးဆင်းသွားရင်ကျမတို့ ၂ယောက်ထဲဆိုတော့ကျောကနည်းနည်းစိမ့်လာ ပြန်တယ်။ ကောင်လေးနဲ့ဒရိုင်ဘာက ပစ္စဘတ်နာမယ်ကျော် FootballChampion "Steeler"အသင်း အကြောင်းပြောနေကြတယ်။ကျမကလောလောဆယ်နှင်းကျမနေပေမယ့် အရင်ရက်ကကျထားတဲ့နှင်းတွေ အရည်မပျော်သေးတာမို့ဖြူဖွေးနေတဲ့မြင်ကွင်းကိုငေးမောကြည့်လိုက်လာရင်းကျမရဲ့နှင်းနတ်သားကို သတိ ရမိသေးတယ်။ ၂၀၀၇ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလရဲ့နှင်းမုန်တိုင်းထဲမှာ ကျမကိုကူညီကယ်တင်ခဲ့တဲ့ နှင်းနတ်သားလေး တစ်ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်။အခု၂၀၀၉ရဲ့ဒီဇင်ဘာမှာတော့နှင်းတွေကျမနေပေမယ့် လူသူတယောက်တလေ မှမရှိတော့တဲ့လေယာဉ်ကွင်းကြီးထဲမှာကျောချမ်းစရာညလည်ခေါင်ကြီးမှာကျမကိုအဖော်ပြုကယ်တင်ပေး တဲ့ နတ်သားလေးတစ်ပါးကိုတွေ့နေရပြန်ပြီ။
Cab လေးက Allegheny မြစ်ကိုဖြတ်ဆောက်ထားတဲ့တံတားပေါ်ဦးတည်လိုက်တော့သူတို့ ကျမ ကိုအရင်ပို့ တော့မယ်လို့သိလိုက်တယ်။ကောင်လေးသွားရမယ့်ဟိုတယ်က အဲ့ဒီမြစ်ကိုဖြတ်စရာမလိုဘူးလေ။ ကျမစိတ်ထဲကစိုးရိမ်စိတ်တွေ၊ဆန္ဒတွေကို သူတို့သိနေကြသလိုပဲ။
အသံထွက်ရေရွတ်လိုက်တဲ့ကောင်လေးကိုကြည့်ရင်းကျမစဉ်းစားမိတယ်။ တကယ်ပဲဒီကောင်လေး ဟာကျမတစ်ယောက်ထဲလေယာဉ်ကွင်းမှာ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ကြောင်တိကြောင်တောင်ဖြစ်နေတုန်း အဖော်တစ်ယောက်လောက်ရှိရင်တော့ကောင်းမှာပဲလို့စိတ်ထဲက ကြိတ်ဆုတောင်းနေတုန်း ခြေသံတဒေါက် ဒေါက်နဲ့ရောက်လာခဲ့တယ်။ ပြီးတော့သူသာရှိမနေရင်ကျမဘုမသိဘမသိနဲ့မနက်၃နာရီထိစောင့်ရမှာ။ အဲဒါ ကို သိနေတဲ့အလား သူက Shuttle Bus Companyကိုဖုန်းလှမ်းဆက်တယ်။ ပြီးတော့ Yellow Cab သမားနဲ့ညှိပေး တယ်။ ကျမဘာသာဆိုဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိသလိုပြောရဲမှာလည်းမဟုတ်။ ခုလည်းကြည့်။ သူဆင်းသွားရင်လို့တွေးပြီးစိတ်ပူနေတာကိုသိနေသလိုပဲ။ကျမကိုအရင်ပို့ပေးဖို့ဒရိုင်ဘာကိုသူပြောလိုက်တာ။
သူဟာ၂၀၀၇တုန်းက ကျမတွေ့ခဲ့တဲ့နတ်သားလေးပဲ ကျမကိုကူညီဖို့ရုပ်ပြောင်းပြီးရောက် လာခဲ့တာလားလို့ ကလေးကလားတွေးမိသေးတယ်။ အင်မတန်ဘေးကျပ်နံကျပ်အကူအညီလိုအပ်နေချိန်မှာ ရောက်လာကြတာကိုး။ ပြီးတော့"ဟိုတုန်းကနတ်သားလေးကို ကျမနာမည်လေးတောင်မမေးမိလိုက်ဘူး။ ဒီကောင်လေးကိုတော့နာမည်မေးလိုက်မှပါလို့တွေးပြီးပါးစပ်ဟလိုက်တုန်းကောင်လေးဖုန်းကမြည်လာတယ်။ သူဖုန်းပြောပြီးမှနာမည်မေးမယ်လို့စောင့်နေတုန်းကားလေးကကျမအိမ်ရှေ့ရောက်လာတော့တယ်။ ကျမကား ပေါ်ကဆင်း၊ အထုတ်အပိုးတွေချပြီးကားလေးထွက်ဖို့ပြင်တော့မှ ကောင်လေးကဖုန်းကိုပိတ်လိုက်တယ်။ ကျမအိမ်လှေခါးပေါ်တက်ဖို့ပြင်နေတုန်းမှာပဲ သူထိုင်နေတဲ့နောက်ခန်းတံခါးလေးလျှောကနဲပွင့်သွားတယ်။
Labels: Short Story |
- ယောက် စာဖတ်နေပါတယ်။
© ခက်မာ Designed by Wordpress Templates